DABAGALKA WARKA: Maxaa ka jira in dad u dhashay Somaliland lagu qabsaday Puntland, Puntland-se maxay ka tiri? – Puntlandtimes
DABAGALKA WARKA: Maxaa ka jira in dad u dhashay Somaliland lagu qabsaday Puntland, Puntland-se maxay ka tiri?
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa dabagal ku sameeyey warar maanta soo baxay oo sheegayay in Muwaadin ka soo jeeda Waqooyiga Soomaaliya (Somaliland), kaas oo u socday qaadashada baasaboorka Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee dalka lagu afduubtay agagaarka caasumada Puntland.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in aysan waxba ka jirin wararka ku saabsan in la qabsaday Muwaadinkaas oo wiil ah kana yimi Hargeysa, kuna sii jeeday Garoowe, isagoo doonaya in uu qaato cadeyntiisa muwaadinimo ee Soomaaliyeed.
Mid kamid ah Saraakiisha Laamaha Amniga ee gobalka Sool, ayaa sheegaya in ay amni ahaan u hubiyaan dhamaan gaadiidka ka imaanaya gobalada Waqooyi ee dalka, oo aysan jirin wax afduub ama qabasho ah oo ay sameeyeen.
Sarkaalkan oo ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay in ay jiraan cabsi soo wajahday muwaadiniintii gaarigas saarnaa oo cabsi ka qabay in waxyeelo soo gaarto, laakiin ay saraakiishu u sheegeen in ay joogaan dalkoodii Hooyo.
Dabagalka Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ka ogaaday dhinacyo ka madax banaan dawladda Puntland in argagax uu soo wajaha safarleyda ka soo jeeda Somaliland, markii ay ka war heleen xogta sheegaysa in muwaadiniin u dhalatay dhinaca Puntland lagu qabsaday Caynaba, waxaana halkaas ka dhashay welwelka ay ka qabeen ciidamada Ammaanka.
Go’aanka ay ku qaadatay Somaliland in ay Afduubato qaar kamid ah Shacabka Soomaaliyeed ee dhalasho ahaan ka soo jeedan mandiqada Puntland ayaa ka dhigan fal lagu joojinayo is dhexgalka ummadda Soomaaliyeed, waxaana cabsi laga qabaa in uu gabi ahaanba joogsado xariirka labada dhinac ee rayidka ah.
WAR BEENTA ISKA DAAYA. SAW TII GAROWE DHALINYARO SOMALILAND LAGU AFDUUBTAY. WEB-PAGE-KIINU WAA CAADIFI EE RUNTA SHEEGA.